Video File size ကြီးနေတာတွေကို quality သိပ်မလျော့စေဘဲ လျှော့ချနိုင်တဲ့ 100% free Tool အချို့ - Khit Minnyo
Computer Basic Video File size ကြီးနေတာတွေကို quality သိပ်မလျော့စေဘဲ လျှော့ချနိုင်တဲ့ 100% free Tool အချို့
Video File size ကြီးနေတာတွေကို quality သိပ်မလျော့စေဘဲ လျှော့ချနိုင်တဲ့ 100% free Tool အချို့
by KhitMinnyo on July 06, 2021 in Computer Basic
Video Size လျှော့ချဖို့ ဘာကြောင့် လိုတာလဲ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာကို ပေးပို့ဖို့၊ email attachment လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်စေ၊ size ကန့်သတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ upload တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲ ကိုယ်ပြန်သိမ်းထားရင်တောင်မှ ကြာလာတဲ့အခါ storage ပြဿနာတက်လာတဲ့ အခါတွေမှာ ဖြစ်စေပေါ့။
ဖျက်ပစ်ရမှာလည်း နှမြောစရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ရှိမှာပါ။ ဒါတွေကို storage သက်သာအောင်လုပ်ပြီး သိမ်းရင် အများကြီး ပိုဆံ့တာပေါ့။
ပြီးတော့ Online ကနေ Video Lesson တွေ တင်ပေးရတဲ့ ကျွန်တော့်လိုလူမျိုးတွေအတွက်လည်း ကိုယ် create လုပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးက သိပ်ကြီးသွားရင် မဖြစ်သေးပြန်ပါဘူး။ Mobile Data နဲ့ Download လုပ်ရမယ့်သူတွေကို အားနာရပြန်ပါသေးတယ်။
size ချုံ့လိုက်ရင် quality ကျသွားပြီးတော့ ဝါးတားတားကြီး ဖြစ်နေမှာလည်း ကြောက်ရပါသေးတယ်။
ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ quality မလျော့ဘဲ video size လျှော့ချဖို့က အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေရပါတယ်။
Video File Size ကြီးစေသော အကြောင်းရင်းများ
Video Editing နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပျက်သွားတဲ့ YouTube Channel မှာ 100% free ဖြစ်တဲ့ DaVinci Resolve ကို သုံးပြီး Professional Video Editing လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်း သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြန်မေးလာတာတွေကိုတော့ အချိန်ပိုမရတာကြောင့် မဖြေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မကျွမ်းကျင်တဲ့ color grading တွေကိုတော့ သေချာပြန်မဖြေနိုင်ပေမယ့် Video Output ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
Professional video editor လည်း သုံးချင်၊ cracked တွေလည်း မဟုတ်ဘဲ တရားဝင် အခမဲ့ သုံးလို့ရတာကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ DaVinci Resolve က အကောင်းဆုံး Pro editor ပါပဲ။ Windows & Mac မှာ 100% free ရတဲ့ DavinResolve ကို သုံးချင်ရင်
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/ ကနေ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Linux မှာလည်း ရပေမယ့်လို့ Linux Mint မှာပဲ အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ Change to Ubuntu အဆင်ပြေပေမယ့်လို့ Kali မှာဆိုရင် မရပါဘူး။
ခေါင်းစဥ်နဲ့ ကိုက်ညီတာပဲ ပြန်ပြောရအောင်။
ဘာနဲ့ပဲ ရိုက်ရိုက် ဗီဒီယိုတွေမှာ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ကြီးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
resolution, bitrate, video length, frame rate, encoding, … စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး size ကွာပါတယ်။
အဲထဲက သိသင့်တာ အချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အချို့လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါအကုန်မဟုတ် ကျန်သေးတာကြောင့်ပါ။
ဒါကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ Resolution ကို pixel နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ Megapixel များလေလေ ဖိုင်ဆိုဒ်က ကြီးလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Resolution များလေလေ Quality ပိုကောင်းလေလေ ဖြစ်သလို ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း ပိုကြီးလေလေပါ။
bitrate ကို Mpbs & kbps တို့နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ရမယ့် information ပမာဏ ကို အဲသည် Mbps or kbps နဲ့ ကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ information များလေလေ bitrate တန်ဖိုး တက်လာလေလေ ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း ကြီးလာလေလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် bitrate အတက်အကျ များတာနဲ့ ငြိမ်တာမှာ ဆိုဒ်ကွာသွားပါတယ်။
3. Video length: ဗီဒီယို ရှည်ရင်လည်း size ကြီးပါတယ်။ ဒါတော့ ပြောစရာတောင် မလိုပါ။
Frame rate ကို fps (Frame Per Second) နဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။ fps ပိုများရင် ဖိုင်ဆိုဒ် ပိုကြီးပါမယ်။ ပုံမှန်ဆို 30 fps နဲ့ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
audio sample rate, rendering quality, buffer size, စတဲ့ အခြားသော ဖိုင်ဆိုဒ်ကို အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
သိသင့်တာလေးတွေ သိပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်လို size ချုံ့ကြမလဲဆိုတာကို ဆက်ပြောပြပါမယ်။
Tool တွေ ရှိပါတယ်။ အောက်ဆုံးမှာ result ယှဥ်ပြထားပါတယ်။
VLC Player ကို အတော်များများ သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Windows, Linux, Mac, Android, iOS, ... စသည်ဖြင့် သုံးနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးနီးပါးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ App ပါ။
Media > Convert/Stream ကနေ open media မှာ တင်ပြီး change နိုင်ပါတယ်။ Choose profile မှာ ရွေးစရာ အများကြီး ပါပါသေးတယ်။ ခုက default အတိုင်း စမ်းပြထားတာပါ။ Customize မှာလည်း အများကြီး ကလိကြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။ ပြီးရင် အဆင်ပြေဆုံးလို့ ထင်တဲ့ setting ကို မှတ်ထားပေါ့။
ပြီးရင် Choose Destination မှာ Save as file ကနေ ရွေးပြီး Save နှိပ်ရုံပါပဲ။ processing အတွက် ခဏတော့ စောင့်ရမှာပါ။
ဒီကောင်ကတော့ Linux မှာပါ အဆင်ပြေတဲ့ App မို့ Video Editing ပေါ့ပေါ့လေးတွေ အတွက် လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Kali မှာ အရင်က apt install shotcut နဲ့ ရပါတယ်။ ခုတော့ ရ မရ မသိပါ။ မရလည်း link ကနေ app သွားယူနိုင်ပါတယ်။
Open file နဲ့ လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးဖွင့်ပြီး ဘာမှ edit စရာ မရှိရင် export ကို နှိပ်ပါ။ edit ချင်သေးရင်လည်း edit ပြီးမှ နှိပ်ပေါ့။
အဲသည်မှာ ကျွန်တော် နမူနာ ပြထားတဲ့အတိုင်း H.264 Baseline Profile ကို ရွေးပါ။ ဒုတိယကော်လံ အောက်နားမှာ Export file , Reset, Advanced ဆိုတဲ့ထဲက advanced ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ပုံထဲကလို Aspect Ratio နေရာမှာ 16:9 ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဆိုဒ်က သိသိသာသာ လျော့သွားမှာပါ။
3. QuickTime Player (Windows & Mac)
Apple’s default media player က QuickTime ပါ။ Windows အတွက် ထုတ်ပေးထားတာ ရှိပြီး ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
File > Open File ကနေ ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
File > Export As. ကနေ 1080p, 720p, 480p စသည်ဖြင့် လိုရာကို ရွေးပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ Quality မလျော့ချင်တဲ့အတွက် 1080p နဲ့ ရွေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင် ဘယ်မှာ သိမ်းမလဲ ရွေးပြီး save နှိပ်ရုံပါပဲ။
အောက်က ကျန်တဲ့ ၂ ခုကတော့ Online Tool တွေပါ။
Upload တင်ပြီးမှ ပြန်ဒေါင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းတော့ ပြောမပြတော့ပါဘူး။
Web link ==> https://www.veed.io/video-compressor
Web Link ==> https://www.videosmaller.com/
5. YouTube (Web)
Web Link ==> https://www.youtube.com/upload (unlisted နဲ့ upload တင်ပြီး downloader တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါ။ ဆိုဒ် သိသိသာသာကြီး လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။
Result (online tool တွေကိုတော့ ထည့်ပြမထားပါ) Try Yourself
Original file ကို highlight ပြထားပါတယ်။ Record IT pro နဲ့ recording လုပ်ထားတဲ့ Mov ပါ။ Original size က 425 MB တောင် ရှိပါတယ်။ ၂၂ မိနစ်စာ presentation ပါ။
VLC နဲ့ မှာ 17.4 MB အထိ လျော့ကျသွားပါတယ်။ wow ☺️(quality တော့ နည်းနည်း ကျပါတယ် 😏Presentation မို့လို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမှန်း သိသာတယ်ပေါ့။ ဆိုဒ်ကလည်း အလွန်အင်မတန် လျော့သွားတာကိုး။)
Shotcut နဲ့က 425.4 to 88 MB အထိ ကျသွားပါတယ်။ ၅ ပုံ တစ်ပုံထိ ဆိုဒ် လျော့သွားတာပါ။ Quality မသိမသာလေးပဲ ကျပါတယ်။ သေချာကြည့်မှ သိရတာမျိုးပါ။ ဒီတော့ သုံးပျော်ပါတယ်။
Quicktime နဲ့က ဆိုဒ် သိပ်မသိမသာပဲ ဆိုရမှာပါ။ Quality လုံးဝ မကျပေမယ့်လို့ သုံးလို့လည်း သိပ်ပြီး ထူးခြားမသွားပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ် သုံးကြပေါ့ဗျာ။
By KhitMinnyo on July 06, 2021
AutoSub October 28, 2021 at 2:29 AM
Thank you very much for sharing the content of your article. I am alsoavideo creator. While editing the video, we also need to add automatic subtitles, so I recommend EasySub, an automatic subtitle generator. It can provide free accurate subtitle generation and free translation in more than 150 national languages.
EasySub April 18, 2022 at 3:12 AM